Wariye Sanadkii hore Xabsi ku dhax geeriyooday oo hada la ogaaday dhimashadiisa ! | Dhexnimo Media
Home Wararka Wariye Sanadkii hore Xabsi ku dhax geeriyooday oo hada la ogaaday dhimashadiisa...
Wariye Sanadkii hore Xabsi ku dhax geeriyooday oo hada la ogaaday dhimashadiisa !
Warbaahinta dalka Cameroon ayaa hadal heysa Wariye u dhashay dalkaasi oo sanadkii hore ku dhax geeriyooday xabsi uu ku xirnaa , waxaana warka geeridiisa hada ogaaday qoyskiisa iyo warbaahinta.
Ciidamada milatariga Cameroon ayaa weriye Samuel Wazizi xiray 3-dii bishii Agoosto ee sanadkii hore, waxa ayna Wariyaha ku eedeeyeen in uu xiriir la lahaa kooxo argagaxiso oo ka dagaalama gudaha dalkaasi.
Wariye Samuel Wazizi ayaa la sheegay in xabsigii uu ku xirnaa ugu dhax geeriyooday jirdil ay ciidamada u geesteen, mana helin wariyaha wax caawinaad iyo gar gaar caafimaad sida uu qareenkiisa sheegay.
Qoraal uu soo saaray afhayeenka wasaarada gaashaandhiga Cameroon ayaa lagu sheegay in Wariye Wazizi uu gudaha xabsiga ku geeriyooday labo isbuuc kadib markii lasoo xiray, waxa uuna beeniyay in Wariyaha u geeriyooday jirdil loo geestay.
Warka ku saabsan geerida Wariyahan dowlada mucaaradka ku ahaa ayaa soo baxday talaadadii lasoo dhaafay, hasa ahaatee milatariga ayaa sheegaya in Wariayaha geeriyooday 17-kii agoosto isbuucyo kadib markii la xiray.
Milatariga Cameron ayaa sheegay in geerida wariyaha la wadaageen qoyskiisa markii uu geeriyooday, hasa ahaatee qoyska wariyaha ayaa beeniyay in milatariga la wadaageen xogta in uu geeriyooday Wazizi.
Dowlada Cameroon ayaa lagu eedeeyaa in tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha kula kacdo dadka siyaasad ahaan kasoo horjeeda dowlada gaar ahaan dadka kasoo jeeda gobolka Af Ingiriisiga looga hadlo ee doonaya in Cameroon ka go’aan.
Previous articleKa Joog Jabuutay Waa Lagu Jabaye (WQ: Cali Cabdi Coomay)
Next articleAskar tacadiyo kula kacay Nin Oday ah oo Dacwado lagu soo oogay kadib Muuqaal laga duubay